Ogaden News Agency (ONA) – Wariyaasha Ree Sweden oo Bil dib loodhigay Xukunkooda Iyo Shucuubta Ogadeniya oo ka walbahaarsan.
Wariyaasha Ree Sweden oo Bil dib loodhigay Xukunkooda Iyo Shucuubta Ogadeniya oo ka walbahaarsan.
Addis Ababa: Wariyaashi Ree Sweden oo shalay lasoo taagay maxkamada TPLF ee Addis Ababa- ayaa waxa lagu caddeyn kari waayay inay yihiin argagaxiso middaas oo Taliska qalafsan ee TPLF uu ku eedeyay wariyaasha. Wariyaasha ayaa marki la weydiyay inay fal argagaxiso u yimaadeen ayaa ku jawaabay maya iyaga oo madaxa lulaya aadna u layaabana eedeyntaas. Eedeynta wariyaasha laguhayo ayaa aha sawiro iyo iyaga oo lasheegay inay lasocdeen dad kamid ah jabhada ONLF. Wariyaasha waxa ay sheegeen inay dhulka kuso galeen viso la’aan rabeena inay kawaramaan xaalada shacabka somalida Ogadeniya.
Qaadiga Maxkamada Shimalis ayaa u sheegay dadkii u doodayay wariyaasha inay muddo bil ah kusoo diyaarsadaan kiiska ay ku difacayaan wariyasha soona hordhigaan maxkamada. Waxyaalaha lagu eedeyayay wariyaasha aya waxa kamid ah inay si sharci darro ah wadanka kusoo galeen, iyo inay moraalka jabhada ONLF kor u qaadayeen siinayeena talooyin iyo waxyaalo kale oo lamid ah.
Sida aan ka war qabno Dhulka Ethiopia ma kajiraan maxkamado madax banaan sikasta ha ahaato e Maxkamada taliska TPLF ee Addis Ababa ayaa ku qanci weydey in maxbuusiinta lagu qaado kiiski horey loogu eedeyay ee ahaa fal argagaxiso inay wariyaashu wadeen. Haddana Saas oo ay tahay Qaadiga maxmakada oo lagu magacabo Shemsu ayaa sheegay in laba qof oo kale oo ahaa dadki la socday labada wariye oo somali ah xukunkooda bari laqaadi doono laguna xukumi doono kiis argagax-sanimo kaas oo xukunkiisu yahay xabsi daayima ama dil. Waxuuna sheegay in labadan qof aysan isdifaacin. Balse waxa xaqiiqa in dadka la socday labada wariye aasan loo sameyn cid u dooda oo difaacda. Waxana sharciga Ethiopia qoraya in qofkasta helo qareen u dooda. Taas ayaa waxa ay ku tusinaysa in wax caddaalad ah oo ka jirta aysan jirin maxkamadaha Ethiopia oo ah mid ay maamulaan taliska qalafsan ee TPLF kaligood. Shacabka Somalida ah ee Ogadeniyana waxa taliska qalafsan uu xalaalsaday xidhaygooda iyo dilkooda cid alaale cidii isku dayda inay kawarantana waxay ku qaadeyaan cabudhin iyo xidhay sida wariyaasha ree Sweden, Wariyaashii horey u xidheen ee New York Times iyo Daily telegraph iyo haayadaha Caalamiga ah Red Cross, MSF iyo Hayadi u danbeysey ee Amnesty international kuwaas oo dhamaan wadanka laga saaray.
Maxkamadaha Ethiopia ayaa ah kuwo aan madaxbanaaneyn waxaana ay hoos tagaan taliska TPLF. Hadda ka horna waxa kiiskan labada wariye ka hadlay kaligi taliyaha Zenawi oo sheegay in labada wariye lagu xukumi doono fal Argagax.
Shacabweynaha Ogadaeniya iyo Guud ahaanba Shucuubta Ethiopia ee ku hoos dulman taliska TPLF ayaa xukunka wariyaasha iyo xaaladoodaba aad uga walbahaarsan waxaana aad loo eegaya talabada uu taliska TPLF ku dhaqaaqi doono. Jaaliyadaha Somalida Ogadeniya ee Wadamada Ree Galbeedka ayaa banaanbaxyo iyo warqado cabasho ah u qoray midowga Europe iyo wadanka Sweden si ay cadaadis usaaraan uguna howlgali lahayen sidii lagu soo deyn lahaa wariyaasha aasan wax ay galabsaden jirin.
Waan ka xunahay dadkii ina caawinayey inay cadowga ku hoos jiraan